Ònye Bụ Onye Na-emegide Kraịst? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mongolian Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Polish Portuguese Portuguese (European) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Onye na-emegide Kraịst abụghị naanị otu onye n’ihi na Baịbụl kwuru na e nwere “ọtụtụ ndị na-emegide Kraịst.” (1 Jọn 2:​18) Kama, okwu Grik a sụgharịrị “onye na-emegide Kraịst” pụtara:
Onye na-ekwetaghị na Jizọs bụ Kraịst (ya bụ, Mesaya), ma ọ bụ onye na-ekwetaghị na Jizọs bụ Ọkpara Chineke.​—1 Jọn 2:​22.
Onye na-emegide Kraịst, bụ́ Onye Chineke Tere Mmanụ.​—Abụ Ọma 2:​1, 2; Luk 11:23.
Onye na-eme ka à ga-asị na ya bụ Kraịst.​—Matiu 24:24.
Onye na-akpagbu ndị na-eso ụzọ Kraịst n’ihi na Jizọs weere na ihe ọ bụla a na-eme ndị na-eso ụzọ ya bụ yanwa ka a na-eme ya.​—Ọrụ Ndịozi 9:5.
Onye na-ekwu na ya bụ Onye Kraịst ma ya ana-aghọgbu ndị ọzọ ma ọ bụ na-emebi iwu.​—Matiu 7:​22, 23; 2 Ndị Kọrịnt 11:13.
Baịbụl kpọrọ ndị na-eme ihe ndị a, ndị na-emegide Kraịst, ma ọ kpọkwara ha niile “onye na-emegide Kraịst.” (2 Jọn 7) Ọ bụ n’oge ndịozi Jizọs ka e bidoro inwe ndị na-emegide Kraịst. Ha ka na-akpakwa ike kemgbe ahụ. Baịbụl buru amụma na ọ bụ ihe ga-eme.​—1 Jọn 4:3.
Otú e si amata ndị na-emegide Kraịst
Ha na-akụziri ndị mmadụ ihe na-abụghị eziokwu banyere Jizọs. (Matiu 24:​9, 11) Dị ka ihe atụ, ndị na-akụzi Atọ n’Ime Otu ma ọ bụ na-ekwu na Jizọs bụ Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile na-agba ihe Jizọs kụziri ụkwụ. Jizọs kwuru, sị: “Nna m ka m ukwuu.”​—Jọn 14:28.
Ndị na-emegide Kraịst anaghị ekweta ihe Jizọs kwuru banyere otú Alaeze Chineke ga-esi na-achị. Dị ka ihe atụ, ụfọdụ ndị isi chọọchị na-ekwu na Kraịst ji ọchịchị ụmụ mmadụ arụ ọrụ. Ma, ihe a ha na-ekwu adabaghị n’ihe Jizọs kụziri. Jizọs sịrị: “Alaeze m abụghị nke ụwa a.”​—Jọn 18:36.
Ha na-ekwu na Jizọs bụ Onyenwe ha, ma ha anaghị erube isi n’iwu ya, ma iwu o nyere ka anyị na-ekwusa ozi ọma Alaeze Chineke.​—Matiu 28:19, 20; Luk 6:​46; Ọrụ Ndịozi 10:42.
Ọ̀ nọ anọ kemgbe, ka ọ̀ ka ga-abịa n’ọdịnihu?